Mivavaka amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny vavaka amin'ny Baiboly FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Mivavaka amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny vavaka
Mivavaka amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny vavaka
Joela 2:25 Ary haveriko aminao ny taona nihinan'ny valala, ny valala, ny valala, ny valala, ny tafika lehibe izay nalefako teo aminareo. Ary hihinana be ianareo ka ho voky ary hidera ny anaran'i Jehovah Andriamanitrareo, izay nanao zava-mahagaga taminao; ary ny oloko tsy ho menatra mandrakizay.
Androany isika dia hijery ireo foto-bavaka ho famerenana amin'ny laoniny miaraka amin'ireo andininy ao amin'ny Baiboly. famerenana amin'ny laoniny dia voalaza fa mitranga eo amin'ny fiainanao, rehefa mitondra fitahiana sy fifaliana roa heny ho anao Andriamanitra ka hanadino anao ary hahatonga anao hanadino ireo fahorianao taloha. Ny famerenana amin'ny laoniny dia mety tsy hamerina ilay very anao, fa hitondra anao zavatra tsara kokoa, zavatra tsara lavitra noho izay very rehetra taloha. Ny Baiboly dia milaza amintsika fa ny fiafaran'i Joba taty aoriana dia tsara lavitra noho ny niandohany. Tsy fantatro izay very anao, anio, fa Andriamanitro hanome anao famerenana indroa indroa amin'ny anaran'i Jesosy.
Tsy Andriamanitra famerenana amin'ny laoniny fotsiny izahay, manompo an'Andriamanitra amin'ny famerenana amin'ny laoniny avo roa heny, na firy taona izay nanjavona na zavatra very, dia haverina aminao aminao amin'ny anaran'i Jesosy ny Andriamanitray. Ny Isaia 61: 7 dia milaza amintsika fa noho ny henatra mahazo voninahitra roa isika. Mety ho nanoratra anao ny olona, ​​ary tsy mieritreritra ny soa ho avy amin'ny fiainanao, fa raha ataonao izao vavaka ataonao izao dia hanova ny tantaranao Andriamanitrao ary hamerina anao indray torana avo roa heny amin'ny anaran'i Jesosy. Mba hahafahanao mankafy ny famerenam-bavaka amin'Andriamanitra, tsy maintsy manana finoana ianao, tsy maintsy mino an'Andriamanitry ny famerenana amin'ny laoniny ianao, tsy tokony hiala mihitsy Andriamanitra ary mamela ny fahavalo handresy ny ady. Tsy maintsy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ianao, mitaky finoana hantsaka avy amin'ireo lavadrano famerenana amin'ny laoniny. Ireo vavaka dia manasongadina ny famerenana amin'ny laoniny ny andininy ao amin'ny Baiboly dia hampitombo ny finoanao amin'ny famerenanao azy io. Hanokatra ny masonao hahita ny andinin-teny fa ny famerenana amin'ny laoniny dia lovanao ao amin'i Kristy. Hitako mamerina anao indray 100 XNUMX amin'ny anaran'i Jesosy ny anaran'Andriamanitra.
Andinin-teny momba ny famerenana amin'ny laoniny
Ary haveriko avy amin'ny fahababoana ny Isiraely oloko ary hanangana ny tanàna efa rava izy ka honina ao; ary hanao tanimboaloboka izy ka hisotro ny divay avy; hanao zaridaina koa izy ka hihinana ny vokatra avy aminy.
Eksodosy 21: 34
Ny tompon'ny lavaka dia hanonitra azy sy hanome vola ho an'ny tompony; ary ny biby maty dia ho azy.
Joela 2: 25-26 - Ary haveriko aminareo ny taona nohanin'ny valala, ny kankana, ny sompanga, ary ny valala, ny tafika lehibe izay nampitondraiko ho eo aminao. (Hamaky bebe kokoa…)
30: 17Fa hampodiko ny fahasalamana, ary hositraniko ny ferinao, hoy Jehovah; noho ny nanaovany anao hoe: Ilay noroahina, hoy izy: Ity dia Ziona, izay tsy mitady olona.
Salamo 51:12 Ampodio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao; ary tohàny amin'ny fanahinao malalaka aho.
Izaia 61: 7 Noho ny fahamenaranao dia hahazo indroa heny ianao; Ary noho ny fahafaham-baraka dia mifaly amin'ny anjarany izy; Ka amin'ny taniny dia hananany indroa; Fifaliana mandrakizay no ho azy.
Asan'ny Apôstôly 3: 19-21 - Mibebaha ianareo, ka miovà, mba hovonoina ny fahotanareo, izay ho avy ny andro famelombelona avy eo anatrehan'ny Tompo; (Hamaky bebe kokoa…)
Jôba 42:10 Ary natolotr'i Jehovah ny babo an'i Joba, raha nivavaka ho an'ny sakaizany izy; ary nomen'i Jehovah an'i Joba indroa toraka izay nananany taloha koa izy.
1 Jaona 5: 4 Fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao; ary izany no fandresena izay maharesy an'izao tontolo izao dia ny finoantsika.
Marka 11:24 Ary noho izany dia lazaiko aminareo: Na inona na inona tononinareo amin'ny fivavahana sy angatahinareo, dia minoa fa efa nahazo ianareo, dia ho azonareo.
1 Petera 5:10 - Fa Andriamanitry ny fahasoavana rehetra, Izay niantso antsika ho amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'i Kristy Jesosy, rehefa niaritra faharetana vetivety ianareo, dia hahatanteraka sy hampiorina ary hampatanjaka ary hampiorina.
Zakaria 9:12 Miverena ho amin'ny batery fiarovana ianareo, ry mpifatotra manam-panantenana; anio no hilazako fa hanome indroa ho anao aho;
Jeremia 29:11 - Fa Izaho mahalala ny hevitra noeritreretiko ho aminareo, hoy Jehovah, dia hevitra fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany.
Jaona 14: 1 - Aza malahelo ny fonareo; minoa an'Andriamanitra, minoa ahy koa.
Galatianina 6: 1 - Ry rahalahy, raha misy olona tratran'ny hadisoana, ianareo izay araka ny fanahy, dia avereno amin'ny fahalemem-panahy izy; mandiniha tena, fandrao halaim-panahy koa ianao.
Matio 6:33 Fa katsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany; ary homena anao ireo zavatra rehetra ireo.
1. Tompo ô, misaotra anao nanaparitaka ny fahavalon'ny tanjoko masina.
2. Ny tsangambato rehetra, ny fombafomba ary ny ody ratsy manohitra ny hoaviko, dia mianjera sy maty, amin'ny anaran'i Jesosy.
3. Izaho dia manadino fa tsy misy na inona na inona, ny fitarihan'ny mitelina ny anjara, amin'ny anaran'i Jesosy.
4. Ny faharatsiana rehetra ao an-trano miady mafy handamina indray ny hoaviko, mianjera ary maty, amin'ny anaran'i Jesosy.
5. Ny anjarako dia mifamatotra amin'Andriamanitra, noho izany dia manapa-kevitra aho fa tsy ho vitako ny tsy hahomby na oviana na oviana, amin'ny anaran'i Jesosy.
6. Izaho dia mandà ny ho voalamina hanohitra ny tanjon'Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy.
7. Nofoanako ny firaketana rehetra momba ny laharako amin'ny tontolon'ny ranomasina, amin'ny anaran'i Jesosy.
8. Ny alitarany rehetra miakatra manohitra ny tanjoko any an-danitra, hongotana amin'ny anaran'i Jesosy
9. Nolaviko ny safidy satanika rehetra ho an'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
10. Kaldera ratsy, tsy handroaka ny fiainako aho, amin'ny anaran'i Jesosy
11. Izaho dia mandringana ny valan-jaza rehetra amin'ny ody ratsy sy ny fehezanteny manohitra ny tanjoko, amin'ny anaran'i Jesosy.
12. Ny hery rehetra an'ny kaldona natsangana mba hanodikodina ny fiainako, avoahy aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
13. Mikotroka ny fanalam-po, mandroaka ny anjarako, amin'ny anaran'i Jesosy.
14. Namerina ny fiara nangalarako aho, tamin'ny anaran'i Jesosy
15. Ny federasiona isaky ny maizina manohitra ny hoaviko, miparitaka, amin'ny anaran'i Jesosy.
16. Tompo ô, hosory ny tantarako.
17. Izaho dia manapa-kevitra fa ny tsy fahombiazana dia tsy hamono ny tanjoko amin'ny anaran'i Jesosy.
18. Ny hery rehetra miady amin'ny hoaviko, mianjera ary maty, amin'ny anaran'i Jesosy.
19. Mpangalatra simba, afaho aho ankehitriny, amin'ny anaran'i Jesosy.
20. Nofoako ny fandaharana satana rehetra nalamina nanohitra ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy
21. Efa tonga tany Ziona aho, tsy maintsy miova ny anjarako, amin'ny anaran'i Jesosy.
22. Ny hery rehetra manaja ny hoaviko, mianjera ary maty, amin'ny anaran'i Jesosy.
23. Tsy mandà ny tadidiko amin'ny fiainana aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
24. Izaho mandà ny hanafaka mpisolo vatan'i Satana ho an'ny laharako, amin'ny anaran'i Jesosy
25. Na inona na inona napetraka hanoherana ny hoaviko any an-danitra, hozongozonina amin'ny anaran'i Jesosy.
26. Ny hery rehetra, misintona hery avy any an-danitra manohitra ny hoaviko, milatsaka ary maty amin'ny anaran'i Jesosy.
27 ny alàlan'i satana rehetra, izay manohitra ny hoaviko, mamadika, amin'ny anaran'i Jesosy.
28. Tompo ô, esory amin'ny tanan'olombelona ny tanjoko.
29. Manafoana ny fananana satana rehetra ny tanjoko, amin'ny anaran'i Jesosy.
30. Satana, tsy hipetrahanao amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratraNy fivavaha mba hisian'ny famerenana amin'ny laoniny ny fahasalamana
Next lahatsoratraVavaka Hanao Fahagagana 50 ho an'ny fanasitranana diabeta
Maame Sarpong 18 Novambra 2019 Amin'ny 12:16 maraina
Andriamanitra anie hitahy anao ilay lehilahin'Andriamanitra
Nina Whayer Bruns 13 Janoary 2020 Amin'ny 4:29 hariva
Misaotra an'ireto vavaka ireto Tsy fantatro izay tokony hivavaka amin'ireto vavaka ireto manampy ahy hahalala izay hivavaka Misaotra .Mahafantatra aho raha mivavaka ho ahy ianao hahazoana ny fanomezana ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra? Nanontany sy nivavaka aho ary tsy nisy na inona na inona nitranga.
hazo fred 25 Desambra 2020 Amin'ny 6:40 maraina
Salama, nina, ianao ve no tadiaviko nina, ny nina avy any deland, im fred, cant get even to you on the net, fa sendra anao aho teto, izaho koa dia notafihan'ny aretina, ary ny fianakaviako koa, dia amin'ny andro farany, ilay ratsy dia hanao izay azony atao mba hisorohana antsika tsy amin'i El-hadhadie. tsy tsara ny tsipelina nataoko. jereo an'i Jesosy ny valinteninao fa tsy fanomezana, Izy no mamaly ny vavaka rehetra alefa any aminy, fa tsy araka ny itiavantsika azy .Mahafantatra ny lasa sy ny ho avy Izy, hoy Izy hoe: Mivavaha tsy mitsahatra, matokia Azy, mamerina ny DIA REHETRA, NY FINOANA Nantsoina .x.
Alice kaluba 13 jona 2020 Amin'ny 1:54 hariva
Misaotra betsaka amin'ireto fampahalalana momba ny fivavaka amin'ny vavaka ity, tena faly aho tamin'ity indray mitoraka ity
Ruth Bushir 1 Desambra 2020 Amin'ny 6:11 alina
Misaotra betsaka Andriamanitra hitahy anao 🙏
Tisa 7 jona 2021 Amin'ny 1:36 hariva
Tena manampy ireo vavaka ireo
Misaotra anao indrindra
Vavaka ho an'ny fahagagana dieny izao
FIVAVAKANA HO ANY NY SUDAN SOUTH